mhando 0.2.4 – Welcome Wordpress 2.8!
Chikumi 9, 2009 kubudikidza chipo 5 Comments
kusunungurwa mutsva uyu akagamuchira kusunungurwa Wordpress itsva iri kuuya 2.8. kusunungurwa Izvi zvinosanganisira anotsigira kunyorwa panguva pasi cheshanduro 2.8 izvo zvichaita kuti mapeji venyu vapinze nokukurumidza uye vawane yepamusoro yakawanda pamwe Yahoo wacho Yslow. Also kwaisanganisira muri matani tsikidzi unocherekedza, zvikuru chinozikamwa ndiyo parumananzombe kuti misoro kuti haana kushanda uye tinoda kukutendai Karl kuti atibatsire kwokungotaura pangu yakarurama. Tinoda ndingadawo kukutendai Mike kuti atibatsire debugging nechinetso prefixes izvo zvaitadzisa nhoroondo uye nhamba kushanda nemazvo. Uyewo kuona ndechokuti wokumwe mutauro RSS Feeds vanofanira kushanda ikozvino.
Tinovimba zvauchasangana kunakirwa kusunungurwa ichi – uye sezvo nguva dzose – Tinofarira kunzwa maonero enyu
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: kuduku, rusununguko, RSS, Wordpress 2.8, Wordpress plugin